Ny Braunschweig sy ny “Schloss”… »
Mandrahona VAOVAO ADY LEHIBE?
Raha tokony ho fampiroboroboana ny fandriampahalemana any Syria dingana haka ny Etazonia sy Israely ny lalàna iraisam-pirenena manohitra ny fanafihana firenena araka ny Torkia sy ny fanafihana ny Kiorda faritra manodidina Afrin. Na dia eo aza mananontanona miresaka momba ny fitaovam-piadiana nokleary Korea Avaratra sarotra io ady eo amin'ny Etazonia sy Korea Avaratra mbola tena mampidi-doza. Ny governemanta federaly tsy manana tafika ao ireo tany baltika: natao ny fametrahana ny OTAN iray hafa foiben'ny redeployment haingana ny tafika ho any amin'ny sisin Rosiana azo atao. Tsy manameloka ny hetsika miaramila sy ny sazy politika sy ny ady ary hiantso lahateny ho vahaolana am-pilaminana ny ady.
IZA fitaovam-piadiana ADY SY FANONDRANANA MANAMPY ho afa-mandositra! Alemaina nitombo ny fanondranana fitaovam-piadiana indray. Dia nandeha U. ny. tany Arabia Saodita, firenena, ny zava-dehibe manao izay hampisy ny ady any Syria sy Yemen. Tiorka fanafihana Afrin ho natao amin'ny alemà Leopard fiara mifono vy sy fitaovam-piadiana madinika.
ady mahatonga ny fiaramanidina ihany koa dia midika hoe: Atsaharo ny fanondranana fitaovam-piadiana!
ADY drôna BAN!
Ny Bundeswehr miantso ny fividianana ny ady drôna. US drôna dia manaiky hozakain'izy avy any Alemaina, tamin'ny alalan'ny fanerena ny bokotra ny tifitra mahafaty voaroaka. Izany fampiharana no lasibatra famonoana olona ao anatiny sy any ivelan'ny ady, maimaim-poana, Fomba arahina ary ny fitsarana.
Izany no vonoan-olona, ary dia mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena!
HO A fitaovam-piadiana nokleary-FREE WORLD!
Miantso izahay ny Governemanta Federaly, farany, ny fanesorana ny fitaovam-piadiana nokleary avy Büchel (Rheinland-Pfalz) mba hampihatra ka noho izany tsy hamela fanavaozana ny nokleary warheads ny United States. Ny governemanta federaly dia tokony hiditra ny Firenena Mikambana farany nokleary fandrarana!
TSY HO fandaniana ateraky ny fitaovam-piadiana!
Ny vaovao GroKo te-hanatsarana sy ny baikon'ny ny OTAN foto-kevitra, ny fiadiana ny fandaniana 2% amin'ny harin-karena faobe antso. Tsy mandà izany. Ny vola dia ampiasaina ho an'ny fampianarana sy ny asa ara-tsosialy sy ara-tsosialy ny trano fonenana, izay mampiroborobo ny anatiny sy ny fiadanana maneran-.
MANAMPY SY ARA-TSOSIALY FIADANANA HARENA AN fivoahana!
Tsy mila tafika EU, fa ny sivily sy ny ara-tsosialy Eoropa, ny fitaovam-piadiana, ady an-trano, firaisan-kina ara-toekarena, Cosmopolitanism sy ny fandraisana sy ny fampidirana ny mpitsoa-ponenana dia!
This entry was posted on Saturday, March 31, 2018 amin'ny 17:07 amin'ny Hans Kottke ary Filed under 2018, Farany, Ankapobeny, Braunschweig, Video. Afaka manaraka ity misy valin-teny ny alalan 'ny RSS 2.0 fahana. Ianao dia afaka mamela ny valiny, na trackback avy amin'ny ny toerana.
29 Users an-tserasera
Tue Jun 25th 3:32:12 UTC 2019